/// stage /// | အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် နည်းလမ်းသစ်
ဤ အဘိဓာန်၏ ဆိုလိုရင်းIn The House
ဤ လေ့လာရေး ယူနစ်တွင် bathroom, entrance, floor, living room, rec room... နည်းတူ 16 ပုံများနှင့် ဖွင့်ဆိုချက် ပါဝင်ပါသည်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လေ့လာမှု ဆိုတာအမြဲတမ်း ပျော်စရာကောင်းနေရပါမယ်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂိမ်းအများအပြားနှင့်အတူ "" Video Booster နှင့် "In The House" Photo Vocabတို့၏ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို လေ့ကျင့်ပါ။
သင်၏ အခမဲ့ အကောင့် အသစ်ကို ဖွင့်၍ ယခုပင် စတင်လေ့လာလိုက်ပါ။
အင်္ဂလိပ်စာကို တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်းသစ်
ရုပ်ရှင်များ - ဂိမ်းများ - ဓာတ်ပုံများ - မိတ်ဆွေများ
English Attack! သည် မီဒီယာနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှနေရ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဖန်တီးထားသော အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူမှုနည်းလမ်းသစ် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန်းသစ်သည့်သင်ယူမှုနည်းလမ်းသည် ဗီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဂိမ်းများနှင့် လူမှုကွန်ယက်များကို နေ့စဉ် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူနိုင်ရန်အတွက် ပေါင်းစည်းပေးထားပါသည်။
ပျော်စရာကောင်းပြီး ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကို တစ်ကြိမ်မျှ စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးသည်နှင့် အခြားသင်ယူရေးနည်းလမ်းများကို သဘောကျတော့မည် မဟုတ်ပါ။
၁၀၀% ပျော်ရွှင်ရပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်
သင့် အင်္ဂလိပ်စာကို အကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုကလစ်များဖြင့် တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ တီဗီ စီးရီး၊ သတင်းများ
Video Boosters များသည် အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူမှုတွင် ဖောက်ထွက်ဆန်းသစ်လိုက်သော နည်းပညာဖြစ်ပါသည်။
ဤအလုံးစုံပါဝင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများသည် ဗီဒီယိုဖြတ်ပိုင်းများပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကဏ္ဍ ခြောက်ခုဖြင့် သင့် ဘာသာစကားစွမ်းရည်အမျိုးမျိုးကို လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။ Video Booster တစ်ခုသည် ပြီးဆုံးရန် ၁၀မိနစ်ခန့်ကြာပါသည်။ ၄င်းအချိန်သည် အာရုံစူးစိုက်မှုရန် ကောင်းဆုံးကြာချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဗီဒီယို လေ့ကျင့်ခန်းပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော် နှင့် နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်များ၊ တီဗီစီးရီးများ၊ ဂီတနှင့် လက်တလောဖြစ်ရပ်များကို နေ့စဉ်အသစ်ထည့်သွင်းပေးနေပါသည်။
Video Boosters အကြောင်း ထပ်မံလေ့လာမည်
ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော်
လေ့ကျင့်ခန်း အသစ်များ နေ့စဉ်ထည့်သွင်းပေးထားသည်
သင့်ဝေါဟာရများကို ကြွယ်ဝစေရန် လုပ်ဆောင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Photo Vocab ကတလောက်သည် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် အကောင်းဆုံး စုစည်းပေးထားသည့် ပုံပြအဘိဓါန် ဖြစ်ပါသည်။
Photo Vocab တိုင်းသည် ခေါင်းစဉ်တစ်ခု အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ် အခြေခံထားပြီး ဝေါဟာရအမျိုးပေါင်း ၂၀ခန့် ကို ရေးဆွဲဖော်ပြထားပါသည်။
စကားလုံးတိုင်း ဖော်ပြချက်တိုင်းတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ တစ်လုံးခြင်းစီ ဘာသာပြန်ပေးထားမှု၊ ဝါကျထဲတွင် အသုံးပြုပြထားမှု နှင့် အသံထွက်များ ပါဝင်ပါသည်။
ဝေါဟာရအသစ်ကို သိရှိပြီးလျှင် Photo Vocab မှတိုက်ရိုက်ကစားနိုင်သော လေ့ကျင့်ရေးဂိမ်းများနှင့် စကားလုံးများ ဖော်ပြချက်များကို မှတ်သားလိုက်ပါ။
Photo Vocabs အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဝေါဟာရပေါင်း ၅,၀၀၀ ကျော်
လျင်မြန်သော ဘာသာစကားလေ့လာရေးဂိမ်းများကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေလိုက်သော အတွေးအခေါ်
အင်္ဂလိပ်စကားတစ်လုံး သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက်တစ်ခုကို မှတ်မိနေစေရန်မှာ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုထားပုံကို အနည်းဆုံး ၇ခေါက်ခန့်မြင်ဖူး အသုံးပြုဖူး ဖြစ်ရပါမည်။ မပင်မပန်းနှင့် မှတ်မိသွားစေရန် ဤကဲ့သို့ အကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘာသာစကားဂိမ်းပေါင်းစုံသည် သင့်ကို Video Booster သို့မဟုတ် Photo Vocab တွင်တွေ့ခဲ့ပြီးသော ဝေါဟာရများကို ပြန်လည်လေ့လာခြင်း၊ ပုံမမှန်ကြိယာများကို လေ့ကျင့်ခြင်း၊ သင့် စကားပြောစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ စာလုံးပေါင်းဂိမ်းများမှအစပြု၍ ဗီဒီယို ကာရာအိုကေအထိ သင်မည်သည့်အခါမှ ပျင်းရိမည် မဟုတ်သည့် ကစားနည်းပေါင်းစုံ ပါဝင်ပါသည်။
ကစားရင်း လေ့ကျင့်မည် : ပျော်ဖို့လည်းကောင်း (ထိရောက်မှုလည်းရှိ)သော English Attack!
ဆုများ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူ တွန်းအားပေးသည့် ဂေဟအဖွဲ့အစည်း
ပွိုင့်များ၊ ဆုတံဆိပ်များ၊ အဆင့်တက်မှု ကဒ်များ
သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို English Attack! တွင် အဆင့်မသတ်မှတ်ပေးပါ။ သင့် အားထုတ်မှု ဇွဲကောင်းမှု၊ အခြေအနေတိုးတက်မှုတို့ပေါ် မူတည်၍သာ ဆုချီးမြှင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားပြုအကောင် ဘုစ်တာသည် သင့်ကို အားပေးရန် နှင့်လမ်းညွှန်ရန် ဆိုက်ပေါ်တွင် နေရာတိုင်း ရှိနေပါသည်။ သင်ခန်းစာတိုင်း ဂိမ်းရလာဒ်တိုင်းသည် ရမှတ်များပေးမည် ဖြစ်ပြီး ထို့ထက်ကောင်းအောင် သင်လုပ်နိုင်စေရန် အားပေးပါသည်။
အဆင့် ၅၀ခွဲထားသည့် ပွိုင့်ရမှတ်များအတိုင်း တက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဆင့်ခြင်းစီသည် သင့်ပရိုဖိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကဒ်ဖြင့် ကိုယ်စားပြုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အချို့သင်ယူမှု များကို ပြီးစီးချိန်တွင်လည်း အောင်မြင်မှု ဆုတံဆိပ်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။
သင့်အင်္ဂလိပ်စာကို မိတ်ဆွေသစ်များနှင့် လေ့ကျင့်ပါ
English Attack! တွင် သင့်ပရိုဖိုင်ကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူ ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်သင်ဖော်ပြပြီး သင့်မိတ်ဆွေများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ၄င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် မှတ်ချက်များပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့် မိတ်ဆွေများကိုလည်း English Attack! သို့ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါသေးသည်။ သင့်မိတ်ဖွဲ့မှုမှာ သင့်ဆန္ဒအတိုင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဖွဲ့မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို သင်မနှစ်သက်ပါက ပိတ်ထားနိုင်ပါသည်။
အဖွဲ့ဝင် ၁၅၀,၀၀၀ အထက်